Mbido AKOTKỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ AKW FOKWỌ Ndị egwuregwu bọọlụ Italiantali Ụmụaka Jorginho Akụkọ Gbasara Eziokwu Ndị Na-adịghị Eke
LB na-egosi Full Story of a Football Genius onye kacha mara aha "Jorge".
Ụdị akụkọ nwata anyị nke Jorginho, gụnyere Eziokwu Akụkọ Untold Biography, na-ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe ndị ama ama site n'oge ọ bụ nwata. Anyị na-aga n'ihu na-agwa gị otú Jorge si bụrụ onye a ma ama.
Nyocha nke Chelsea FC Legend gụnyere akụkọ ndụ ya tupu ama aha ya, ndabere ezinụlọ ya, mmekọrịta mmekọrịta ya na ọtụtụ ihe ndị ọzọ gbasara OFF-Pitch (amachaghị) banyere ya.
Ee, onye ọ bụla maara na ọ bụ Maurizio Sarri si onye aka nri ya na mbinye aka nke mbu mgbe o sonyere Chelsea FC n'oge okpomọkụ nke 2018.
Otú ọ dị, ọ bụ nanị mmadụ ole na ole maara ọtụtụ ihe banyere Jorginho's Bio nke bụ ihe na-akpali mmasị. Ugbu a na-ebuteghị ọzọ, ka anyị bido.
Akụkọ Jorginho nke Childhoodmụaka - Mmalite Ndụ na Ezinụlọ:
Malite, aha ya zuru oke Jorge Luiz Frello Filho. A mụrụ Jorginho na 20th ụbọchị nke December 1991 na nne ya, Maria Tereza (onye bụbu onye na-agba ọsọ na-amakarị nwa agbọghọ na-amakarị n'okpuru) na nna a na-amaghị ama na steeti Santa Catarina, Brazil.
Nkwupụta tupu amua Ya: Tupu a mụọ Jorginho, nne ya Maria kwere onwe ya nkwa na ọ bụrụ na ọ mụrụ nwa nwoke, na ya ga-eme ihe ọ bụla iji hụ na nwa ahụ ghọrọ ọkachamara n'ịgba ọsọ.
Okwu ndị ahụ sitere na mgbu na obi ilu maka Maria, bụ onye n'onwe ya nwere ọrụ football na-emezughị nke kwụsịrị na ọkwa onye amateur. Lee, ihe niile wee bụrụ otu. Ọ mụrụ Jorginho anyị maara taa.
Na-eto eto elu: Jorginho tolitere na nne na nna ya n'ọdụ ụgbọ mmiri nke Imbituba, obodo dị n'ụsọ oké osimiri n'ebe ndịda Brazil.
A maara nna ya na-amaghị nke ọma na ọ na-akpa ike n'ụzọ ọ bụla nke okwu ahụ. Mgbe ọ dị afọ isii, obere Jorginho hụrụ ka ndị mụrụ ya na-enwe nsogbu alụmdi na nwunye mgbe nile, nke mere ka ha gbaa alụkwaghịm.
N'oge ụfọdụ n'oge, nna ya ji obi ike pụọ na ezinụlọ ahụ, na-ahapụ obere Jorginho na nne ya ka ha dị ndụ naanị ha, na-enweghị ego ọ bụla.
Mgbu, Ọ bụla nwatakịrị nke bie ndụ site na nkwụsị nke nne na nna ga-amarakwa na ọ na-ewute ya nke ukwuu.
Maka Little Jorginho, ịhụ ịgba alụkwaghịm nke ndị mụrụ ya nwere n'ahụ ya, na-emebi mmetụta uche, bụ nke ọ diri n'oge ikpeazụ nke ndụ ntorobịa ya.
Jorginho Biography - Nweghachi na Ọrụ Mmalite:
Mgbe ịgba alụkwaghịm ahụ, nne Jorginho gakwuuru ndị mụrụ ya na Italytali bụ ndị gwara ya ka ya na nwa ya nwoke si Brazil gaa Italytali.
Mgbe ọ dị afọ 6, n'afọ 1997, Jorginho kwagara na Verona, ugwu Italy na nne ya.
Mgbe ọ nọ na Italytali, nne Jorginho nwetara ọrụ. O jiri oge ya niile rụọ ọrụ dị ka onye mkpocha iji tinye nri na tebụl ma nweta ego zuru ezu.
N'ịchọ ịmalite imezu nkwa ya, ejiri akụkụ ụfọdụ nke ego ndị a zụta bọlbụ nwa ya nwoke ọ hụrụ n'anya. N'okpuru ebe a bụ bọọlụ mbụ Jorginho, nke a zụtara ozugbo ọ mụtara ije ije.
Dị ka Jorginho tinyere ya;
Enweghị ihe eji egwuri egwu ma ọ bụ egwuregwu mgbe m dị obere, naanị football. TRue emptiness mere site na enweghị nna m kwụsịrị mgbe football nọ n'ụkwụ m.
N'ịchọ ịmalite ime atụmatụ maka ọrụ maka nwa ya nwoke, nne Jorginho zụtara nwa ya akpụkpọ ụkwụ na ngwa egwuregwu ndị ọzọ.
Nke a mekwara ka ọ bụrụ mmasị na football, wee duga ya ka o debanye aha ya na otu ìgwè ndị ntorobịa nọ n'ógbè ahụ (nke dị n'okpuru ebe a) onye nyere ya ohere iji gosipụta talent ya.
Marek Hamsik Nwatakịrị Akụkọ Akụkọ Na-adịghị Ejighị Ezi Ihe
Jorginho Biography Eziokwu - Ọzụzụ nne:
Jorginho na-ahụ na mama ya dịka onye naanị ya nọ n'ụwa nke bara uru otu narị ndị nkụzi pụtara ìhè.
Dika nwatakiri, Jorginho dabere na usoro nlekota nke nne ya karia ndi nkuzi ya.
Ọ gaghị abụ ndị nrịba ama na - enweghị nwanyị na - ebute ọ bụghị naanị ya, mana ndị enyi ya (nke dị n'okpuru ebe a) ịhụnanya maka egwuregwu ahụ.
N'oge ahụ, Maria Tereza Freitas mere ka ọzụzụ ọzụzụ osimiri dị mkpa maka nwa ya nwoke bụ Jorginho bụ onye na-enwe mmasị iso ndị enyi ya.
Jorginho Bio - Footballlọ Ọrụ Ngwá Ọrụ:
Ndụ Jorginho gbanwere afọ ole na ole ka e mesịrị ka ọ ghọrọ onye a ma ama n'etiti ndị na-ama ọtụtụ ihe banyere mmetụta mama ya nwere na ọrụ ya.
N'agbanyeghị nke ahụ, ọ chere maka oge kwesịrị ekwesị, nke mechara bịa.
Ụbọchị a tụrụ anya ya mechara bịa mgbe otu ìgwè Ndị ọchụnta ego hụrụ Italy n'anya kpebiri ịmepụta ihe nkwado football nke e mere iji kwalite football football na Northern Italy.
Ndị ọchụnta ego tinyere ego na-enweghị isi na ịtọlite ​​ụlọ akwụkwọ bọọlụ dị na 180 kilomita site n'ụlọ Jorginho.
Nne Jorginho kwenyesiri ike nwa ya ka o debanye aha ya ka o wee nwee ohere ka mma na Europe.
Ụmụaka Eden Hazard Story Plus Na-adịghị Eke Eziokwu Akụkọ
Jorginho nke dị n'okpuru ebe a bụ n'etiti ụmụ nwoke 50 ndị kewapụrụ onwe ha na ezinụlọ ha ka a họpụtara ha ka ha bụrụ akụkụ nke ọrụ ịgba bọl.
Mgbe ọ dị afọ 13, ọ natara ụgwọ ọnwa mbụ ya kwa izu na bọọlụ nke ọ na-eme na nne ya.
Ma Jorginho na nne ya sere onyinyo ebe a na-eme ememme nkwekọrịta ntorobịa mbụ ya ebe o nwetara naanị € 18 otu izu.
Jorginho jiri akụkụ ka ukwuu nke 18 ya n'izu izu iji nọrọ na nne ya mgbe ọ laghachiri n'ụlọ akwụkwọ ọzụzụ ya.
N'oge ahụ, ụlọ ọrụ ntorobịa ya dị nnọọ anya site n'ụlọ ya. Maka Jorginho, ncheta nke ịkwaga 180 kilomita site na nne ya ka na-ewute ya taa. N'ajụjụ ọnụ a na-adịbeghị anya, ọ sịrị;
"Ọ bụrụ na m na-ekwu okwu banyere ya, enwere m mmetụta dị nro na akpịrị m. Site na € 18, ana m eji euro ise maka akwụmụgwọ mobile nke ejiri kọọrọ ndị ezinụlọ m. Ọ dị ka nke ahụ ruo otu afọ na ọkara.
Intensifying Beach Training na mama m:
Ka Jorginho na-emecha ọrụ ntorobịa ya, ọ lara n'ụlọ mgbe mama ya kpọrọ ya oku ka ọ gaa otu ụzọ n'otu ọzụzụ na Brazil Beach.
Ebumnuche nke a iji kwadebe ya maka nkwekọrịta nkwekọrịta site na nnukwu klọb.
Jorginho Biography Eziokwu - tozọ A Maara Aha:
N'oge na-adịghị anya Jorginho nyere ndị ntorobịa nkwekọrịta na Hellas Verona. Mgbe o nwetara ya, ụlọ ọrụ ahụ nyere ya isi nri na ụlọ n'elu isi ya.
Jorginho zara ya ozugbo site na iji ezigbo akwụkwọ. Dịka nwatakịrị dị umeala n'obi, ikike o nwere iji mesoo onye a ma ama dabara adaba n'ụzọ o si eji bọl.
Mgbe ị gachara igwu egwu AC Sambonifacese maka ego ego kwa afọ. Jorginho laghachiri ka ọ na-eduga ndị otu ya na nkwalite Serie A.
Nke a mere ka mmasị sitere na Napoli, bụ nke ọ gara n'ihu ịbanye nkwekọrịta n'okpuru onye njikwa ahụ, Rafael Benítez.
Jorginho Biography Eziokwu - Bilie Iji Maara Aha Ya Akụkọ nke Ọma:
Na Napoli, Jorginho enwughị ruo mgbe otu afọ na ọkara gachara niile maka otu nwoke aha ya Maurizio Sarri, onye chere na ọ ga-arụ ọrụ na klọb ma kpọtee anụ anụ ahụ n'ime ya.
Esi mara Sarri: Ugbua mgbe ọzụzụ mbụ ya na ya gasịrị, Maurizio Sarri chọpụtara Jorginho ka ọ bụrụ onye ọkpụkpọ teknụzụ nke nwere ike iche ngwa ngwa karịa onye ọ bụla ọzọ na otu.
Dabere na Maurizio Sarri;
Ahụrụ m onye inyeaka etiti. Onye nwere ọgụgụ isi, ọgụgụ isi na ọhụụ gbasara ohere. Jorginho nwere ihe pụrụ iche. Ọ na-ahụ karịa ndị ọzọ.
N'oge ọkọchị nke 2018, Maurizio Sarri hapụrụ Napoli gaa Chelsea. Na-awụ akpata oyi n'ahụ, Jorginho kwetakwara na a ga-enyefe ya ka ọ laghachikwuru onye nkụzi mbụ ya Maurizio Sarri mgbe o nwetara ọrụ dị ka onye njikwa Chelsea n'oge ọkọchị nke 2018.
N'okpuru ebe a bụ foto nke ndị enyi abụọ.
Dika anyi na ede, nne ya, Maria bu nwanyi kacha nwee obi uto mgbe o mezuru nkwa o kwere n'onwe ya.
Taa, ọ na-ehichapụ anya mmiri ka ọ hụrụ nwa ya nwoke ka ọ na-arụ ọrụ ka ọ na-egwuri egwu na Premier League. Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme ugbu a.
Banyere nwunye Jorginho - Natalia:
N'etiti nwoke ukwu ọ bụla, e nwere nnukwu nwanyị, ma ọ bụ ya mere okwu ahụ na-aga.
Na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ Jorginho na-aga nke ọma, enwere enyi nwanyị mara mma nke mechara ghọọ nwunye.
N'ịbụ onye na-abụghị nne ya, Jorginho nwere Natalia ugbu a dị ka ịhụnanya maka ndụ ya.
Ejikọtara ya na Jorginho na Natalia site na nwa nwoke aha ya bụ Vitor, nke ọdịdị obi ya mere ka ịzụ ụmụ na-enwekwu obi ụtọ karị ma ghara inwe nrụgide maka lovebirds.
Dị ka a hụrụ na foto dị n'okpuru ebe a, ọ bụ ụdị ndụ Jorginho na pitch nke na-ewuli ya zuru ezu. Ọ bụ ezigbo ezinụlọ nke na-ebute nwunye ya na ụmụ ya ụzọ.
Nyochaa: Daalụ maka ịgụ akwụkwọ akụkọ Jorginho nke Childhoodmụaka Akụkọ nke Gbasara Eziokwu Ndị Na-adịghị Agbanwe. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịkwụwa aka ọtọ. Ọ bụrụ na ị hụ ihe na-adịghị ele anya n’isiokwu a, biko tinye okwu gị ma ọ bụ kpọtụrụ anyị!.
Akụkọ nwata Armando Broja gbakwunyere eziokwu akụkọ ndụ na-enweghị atụ
Akụkọ nwata Malang Sarr gbakwunyere eziokwu akụkọ ndụ na-enweghị atụ
Victor Osimhen Childhood Story Plus Ihe Mere Untold Biography Eziokwu
Linda história. Conheço bem Imbituba. Fico feliz ao ver uma linda história de àjà ndị mmadụ na superação ter chegado a um ikpeazụ feliz e cheio de realizações.